Prasta Khabar-यस्तो जोखिमपूर्ण यात्रा कतिञ्जेल ?
शनिबार करिव ४ बजेतिर मनहरी बजारबाट चामल लगायतका अन्य सामग्री बोकेर काँकडातर्फ लाग्दै थिए अमृत प्रजा र राजकुमार प्रजा ।
मनहरीबाट काँकडा जाने बाटो विगतमा पनि राम्रो छैन । खोला वारपार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । झन् पछिल्लो बर्षाले झनै क्षति पु¥याएको छ । जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा त्यस क्षेत्रका स्थानीय छन् । त्यही मध्येका हुन् अमृत र राजकुमार । कतै पहिरो त कतैं बाटो नै भत्किएको अवस्था झेल्दै उनीहरु यात्रा गर्ने क्रममा यसअघि आपखोल्सी काठेपुल भएको स्थानमा अहिले पुल नै रहेनछ ।
उनीहरु जोखिमपूर्ण ढंगले अघि बढ्ने क्रममा माथिबाट ठाउँ ठाउँमा माथिबाट ढुंगा समेत खसिरहेको थियो । खसेको ढुंगाले लागेर उनीहरु घाइते समेत भए । भिर र हिलाम्मे सडक पार्दै गर्दै यात्रा गर्न यस क्षेत्रका बासिन्दा बाध्य छन् । उनीहरु राज्यसंग सोधिरहेका छन् –यस्तो जोखिमपूर्ण यात्रा कतिञ्जेल ?
राजन बर्नबास प्रजा